Himalaya Dainik » मेरी श्रीमतीले मलाई १० वर्षसम्म बला-त्कार गरिन्
साधारणतया घरेलु हिं’साका पी’डित धेरैजसो महिला नै हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रको आँकडा अनुसार संसारको एक तिहाई महिला र किशोरी आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै बेला घरेलु वा यौ’न हिं’साको शि’कार हुने गर्छन् ।
पुरुषमाथि हुने घरेलु हिं’साका घ-टना कमै सार्वजनिक हुन्छन् र यसबारे कमै चर्चा हुने गर्छ ।यो विषयलाई धेरैजसो स्थानमा भेदभावयुक्त नजरले हेरिन्छ र अधिकांश पी-डितले यो संघर्ष एक्लै सामना गर्नुपर्छ । युक्रेनका एक यस्तै युवकले आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा आफ्नो कहानी सुनाएका छन् ।
मलाई हालै महसुस भइरहेको छ कि मेरी पूर्व श्रीमतीले पछिल्लो १० वर्षदेखि मेरो ब*लात्का*र गरिरहेकी थिइन्
उनले बीबीसीसँगको कुराकानी यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।
बाहिरबाट निकै सुन्दर देखिन्थ्यो तर…
मलाई थाहा छैन कि मेरा साथीहरुले कहिले यसबारे शं-का गरे वा गरेनन् । बाहिरबाट हेर्दा निकै राम्रो देखिन्थ्यो । मुस्कुराएको अनुहार, साथी, अत्यधिक पैसा र आत्मविश्वास । हामीले सँग–सँगै आधा संसार घुम्यौं ।
जब हामी सँगै यात्रामा निस्कन्थ्यौं तब मलाई डर लाग्दैनथ्यो । उनले अरुको अगाडि मलाई चो*ट पुर्याउने आँट गर्दिनथिन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो, एक्लै हुँदा उनीबाट बच्नु ।
मलाई हालै महसुस भइरहेको छ कि मेरी पूर्व श्रीमतीले पछिल्लो १० वर्षदेखि मेरो ब*लात्का*र गरिरहेकी थिइन् ।इरा मेरो जीवनमा आएकी पहिलो महिला थिइन् । जब हामी भेट्यौं, हामी करिब २० वर्षका थियौं । उनले नै मलाई प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।
मेरा आमाबुवाले यदि मैले कसैलाई डेट गरिरहेको छु भने मैले तुरुन्त घर छोड्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सम्बन्ध सुरु गर्नुको अर्थ आफ्नो परिवार र आफ्नो टाउकोमाथिको छतलगायतको सबैकुरा छोड्नु थियो । एकदिन भित्र मैले सबैकुरा गुमाउनुपर्यो ।
यो ड’रलाग्दो थियो, तसर्थ जब मसँग छुट्टै बस्नका लागि पर्याप्त पैसा भयो तब यो स’म्बन्ध सुरु गरेँ ।
यौ’नसम्ब’न्ध हुँदा तपाईंले रोमाञ्चक महसुस गर्नुपर्छ तर मेरो कहिले पनि त्यस्तो भएन । मलाई यसअघि यौ’नस’म्बन्ध केही अनुभव पनि थिएन ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा के भने मेरी आमा मेरो अनुहार र चालढा’लका लागि ल’ज्जित महसुस गर्नुहुन्थ्यो त्यसकारण ममा आत्मसम्मानको निकै कमी थियो ।
मैले यौ’नस’म्बन्ध स्थापित गर्ने पहिलो कोसिस इरासँगै गरेँ । त्यतिबेला म यौनसम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्थेँ । यद्यपि, हामीबीचको यौ’नस’म्बन्ध सामान्य थिएन । यो पी’डादायी र आ’क्रामक हुने गर्दथ्यो । हाम्रो पहिलो यौ’नस’म्बन्ध लगभग पाँच घण्टासम्म भयो, त्यसपछिका यौ’नस’म्बन्ध निकै पी’डादायी भए ।
हामीबीचको यौ’नस’म्बन्ध एक–दुई घण्टासम्म हुन्थ्यो । यौ’नसम्ब’न्ध हुँदा तपाईंले रो’माञ्चक महसुस गर्नुपर्छ तर मेरो कहिले पनि त्यस्तो भएन । मलाई यसअघि यौ’नस’म्बन्ध केही अनुभव पनि थिएन । मलाई लाग्थ्यो यौ’नस’म्बन्ध यस्तै हुन्छ तसर्थ यसका लागि आफ्नो सहमती दिने गर्दथेँ ।
तर एकदिन मैले ‘नाईं’ भने । तर उनी रोकिइनन् । त्यतिबेला यो ब/लात्का/रमा परिवर्तन भयो ।
‘म फ’सिसकेको थिएँ…’
मलाई एउटा लामो व्यापारिक यात्राका लागि विदेश जानु थियो । इरालाई गुमा’उँछु कि भन्ने ड’र लाग्थ्यो । त्यसकारण मैले उसलाई सँगै जान भनेँ । मैले उनलाई विवाहको प्रस्तावसमेत गरेँ । उनले विवाह गर्न अस्विकार गरिन् तर मसँग जान भने तयार भइन् । त्यसपछि यहाँबाट सुरु भयो उत्पी’डन ।
अबेरसम्म काम गरेपछि म निकै थाकेको हुन्थेँ । म आराम गर्न चाहन्थेँ तर उनी यौ’नसम्ब’न्ध चाहन्थिन् । उनी भन्थिन्, ‘म निकै लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेकी छु । तिमी तयार हुनैपर्छ ।’
मैले अस्विकार गर्दा उनी ममाथि कु’टपि’ट गर्ने गर्थिन् त्यसपछि म विवश हुन्थेँ । उनी मलाई आफ्नो नङले चो’ट पुर्याउँथिन्, मलाई मु’क्का हान्थिन् । उनी यस्तो स्थानमा चो’ट पुर्याउँथिन् जुन लुगाले छोपिन्थ्यो जस्तै छाती, पिठ्यूँ, हात, खुट्टा । अनुहारतिर चो’ट लाग्दैनथ्यो ।
मैले कहिले पनि उनीमाथि हात उठाइनँ किनभने मलाई महिलामाथि हात उठाउनु ठूलो ग’ल्ती हो भन्ने शिक्षासहित हुर्काइएको हो । मैले आफूले आफैंलाई निकै सानो र कमजोर महसुस गर्न थालेको थिएँ । मसँग त्यो स्थितीबाट बच्ने कुनै तरिका थिएन ।
मैले होटलमा छुट्टै कोठा लिने कोसिस गरेँ तर त्यस्तो हुन सकेन ।
मलाई कामपछि होटल फर्कन ड’र लाग्थ्यो त्यसकारण म पसल बन्द नहुञ्जेल मलमा घुम्ने गर्दथेँ । बजार बन्द भएपछि म पूरा शहर घुम्थेँ । चिसो मौसम थियो र मैले आफूसँग पर्याप्त न्यानो लुगा पनि लगेको थिइनँ । मलाई ज्व’रो आयो र सं’क्रमण पनि भयो । तर इरालाई यसले कुनै फरक पारेन । उनले त्यहि गरिन्, जुन उनी चाहिन्थन् ।
सबैभन्दा ख-राब स्थिती त सप्ताहन्तमा हुन्थ्यो । शनिबार रातीदेखि आइतबार बिहानसम्म यात’ना चलिरहन्थ्यो । म युक्रेन फर्कने दिनको गन्ती गर्दथेँ । मैले इरासँगको स’म्बन्ध तो-ड्ने निश्चित गरेको थियो तर म ग’लत थिएँ ।
मैले कोसिस गरेँ तर…
म आफ्नो आमा–बुवा भए ठाउँ फर्किएँ । म इरासँग सँगै बस्नु त परको कुरा उनलाई स’म्पर्क समेत नगर्ने सोचमा थिएँ । मैले आफ्नो फोन स्विच अफ गरिदिएँ र उनलाई हरेक स्थानमा ब्लक गरिदिएँ ।
म आफ्नो घरमा लुकेर बस्थेँ तर उनी मेरो घरमा आएर बन्द ढोका नजिकै बस्ने गर्थिन् । उनले मलाई अब सबैकुरा ठिक हुने सान्त्वना दिन्थिन् । अन्त्यमा एक्लो हुने ड’रले म उनी भएठाउँ फिर्ता भएँ ।
यसपटक उनले विवाह गर्न द-बाब दिइन् । म यस्तो होस् भन्ने चाहदैन थिएँ तर पनि हामीले विवाह गर्यौं ।
इरालाई सबैसँग सम’स्या थियो । मेरो साथीभाइ, परिवारका सदस्य, सबैसँग । म जहाँसुकै भएपछि मैले उनको फोन जसरी पनि उठाउनुपर्दथ्यो । उनी अचम्मको प्रश्न सोध्थिन्, जस्तैः तिमी त्यो कन्फरेन्समा किन जान्छौ ? तिमी ती साथीहरुलाई किन भेट्छौ ? म हरेक पटक उनीसँगै बस्नुपर्दथ्यो । म उनको लागि कुनै खेलौना झैं थिएँ जो हरेक समय उनको मन बहकाउन बा’ध्य थिएँ ।
इराको जागिर थिएन । म जागिर गर्थेँ, खाना बनाउँथे र सर–सफाई गर्दथेँ । हामीले एउटा ठूलो अपार्टमेन्ट भाडामा लिएका थियौं जसमा दुईवटा बाथरुम थिए । तर मैले पाहुनाका लागि बनाइएको बाथरुम प्रयोग गर्नुपर्दथ्यो । उनले प्रयोग गरेको बाथरुममा म जान पाउँदिनथेँ ।
प्रत्येक दिन मैले १० बजेसम्म उनी उठ्ने प्रतिक्षा गर्नुपर्दथ्यो, उनको निद्रा केही गरी भं-ग हुनु हुँदैनथ्यो । हामी छुट्टा–छुट्टै कोठामा सुत्ने उनले निश्चित गरेकी थिइन् तर मैले कोठामा चुकुल लगाउन पाउँदिनथेँ । म कहिले पनि एक्लो हुन पाउँदिनथेँ ।
यी सबैबाट बच्नका लागि म दैनिक १०–१२, यहाँसम्म कि १४ घण्टासम्म काम गर्न थालेको थिएँ । म विकेन्ड र छुट्टीमा पनि काम गर्दथेँ
जब म कुनै ग’ल्ती गर्दथेँ तब उनी ममाथि चि’च्याउँथिन् र मलाई कु’ट्ने गर्थिन् । यस्तो लगभग हरेक दिन हुन्थ्यो ।
जे जति हुन्थे, त्यसमा सबै मेरै दोष हुन्थ्यो । उनलाई कस्तो पुरुष चाहिन्छ र मैले के गर्नुपर्छ भनेर मलाई सुनाइरहन्थिन् । म कम’जोर थिएँ । उनले जे भनेपछि म गर्दथेँ किनभने म उनको रिस झे’ल्न चाहन्नथेँ ।
मैले जतिसुकै ख’राब महसुस गरेपनि, यो यातना रोकिदैनथ्यो । म पनि परफेक्ट थिइनँ । यी सबैबाट बच्नका लागि म दैनिक १०–१२, यहाँसम्म कि १४ घण्टासम्म काम गर्न थालेको थिएँ । म विकेन्ड र छुट्टीमा पनि काम गर्दथेँ । यसो गर्न सजिलो लाग्थ्यो । केही मानिसहरु स’मस्यामा हुँदा र’क्सी पिउँछन्, कोही काम गर्छन् ।
‘से’क्स शब्दसँगै ड’र लाग्न थाल्यो’
सुरुको तीन वर्षसम्म त मलाई से’क्स मनपर्दैनथ्यो तर त्यसपछि त मलाई यसको नाम सुनेर नै प्यानिक अट्याक हुन थाल्यो । त्यसपछि जब इरा ममाथि ज’बर्जस्ती गर्ने कोसिस गर्थिन, तब म उनलाई ध’क्का दिएर भा’ग्ने गर्दथेँ र कतै लुक्ने गर्दथेँ ।
इरालाई लाग्थ्यो कि हाम्रो यौ’नस’म्बन्ध मेरा कारण ख’राब भइरहेको छ । उनले कतिपटक त मलाई से’क्सोलोजिस्टकोमा लिएर गइन् । म से’क्सोलोजिस्टको अगाडि पनि ब/ला/त्कार र उ’त्पीडनको कुरा गर्न सक्दिनथेँ । तसर्थ अन्त्यमा सबै दोष मेरो टाउको आउँथ्यो ।
मैले आफ्नो स’म्बन्धवि’च्छेद हुनु केही वर्ष अघि मात्रै आफ्नो उ’त्पीडनबारे बोल्न सकेको हुँ ।
त्यो शरद ऋतुको मौसम थियो, म ब्रोन्काइटिस र उच्च ज्व’रोका कारण थलिएको थिएँ । त्यतिबेला मेरो हेरविचार गर्ने कोही पनि थिएन । त्यो समयमा मलाई महसुस भयो कि मेरी श्रीमतीलाई यस्ता कुराले केही असर पार्दैनँ र म म’रेपनि कसैको ध्यान मप्रति केन्द्रित हुनेछैन ।
म ड’र र घि’नले भरिएको थिएँ । एकपटक म आफ्नो आमा–बुवालाई यसबारे भन्न उनको घर पनि गएँ तर त्यतिबेला उहाँहरु हुनुहुन्थेन । म एकपटक पुनः एक्लो भएँ ।
त्यसपछि एक दिन इन्टरनेटमा काम गरिरहेका बेला एउटा विज्ञापनयुक्त विन्डोमा एउटा च्याट पप अप भयो । मैले त्यहाँ कुराकानी सुरु गरेँ । त्यहाँ सबैकुरा गो’प्य थियो । पहिलो पटक मैले आफ्नो जीवनबारे सबैकुरा त्यहाँ गरेँ । यद्यपि, म त्यतिबेला पनि आफू उ’त्पीडनमा परेको कुरा स्विकार गर्न सकिरहेको थिइनँ यद्यपि मैले लगातार ‘नाई’ भन्न थालिसकेको थिएँ ।
सुरुमा मैले स–सानो कुरामा नाई भनेँ त्यसपछि आवश्यक कुराका लागि । अन्त्यमा मैले एक थृेरापिस्ट भेटेँ जसले मेरो मद्दत गरे ।
थेरापी सेशनमा मैले र इरा, दुबैले कुरा गर्नुपर्दथ्यो र जब म बोलिरहेको हुन्थेँ, त्यतिबेला उनले मलाई केही भन्न पाउँदिनथिन् । उक्त सेशनमा मैले पहिलो पटक आफ्नो उत्पी’डनबारे भनेँ ।
इरा मेरो कुरा सुनेर अ’त्यधिक रि’साइन्, उनले ममाथि चि’च्याउँदै मेरो कुरा झु’टो भएको बताइन् । यद्यपि, त्यसपछि उनले स’म्बन्धवि’च्छेदको कुरा गरिन् । मलाई लाग्दैन कि उनले साँच्चै सम्ब’न्धवि’च्छेद चाहन्थिन् । सायद उनले मलाई चुप गराउनका लागि यस्तो भनेकी होलिन् । तर मैले तुरुन्त हुन्छ भनिदिएँ ।
आखिर एक महिनापपछ मैले सम्ब’न्धवि’च्छेदको कागजात पाएँ । त्यो मेरो जीवनको सबैभन्दा खुसीको दिन थियो ।
स’म्बन्धवि’च्छेदको एकदिनपछि मैले उनीमाथि चिच्या’उँदै भने, ‘तैंले मेरो ब’ला/त्कार गरिरहेकी थिइस् !’ उनले भनिन्, ‘मैले तिमीलाई ब/ला’त्कार गरिरहेकी थिएँ, त्यसो भए के भयो त ?’ उसलाई त्यसपछि केही भन्नै आएन । एक तरिकाले उनले आफ्नो व्यवहार स्विकार गरिन् तर पनि ऊ हाँसिरहेकी थिइन् ।
म आफ्नो आमा–बुवा भएठाउँ गएँ । मैले आफ्नो जागिर छोडिदिएँ र केही हप्ताका लागि घरमा नै बसेँ । एक दिन उनी मेरो घरमा आएर ढोका ढक्ढकाउन थालिन् र चि’च्याउन थालिन् । मेरी आमा उनी चि’च्याएको देखेर ड’राउनुभयो । म मनमनै मुस्कुराएँ । मैले सोचेँ, ‘आमा, तपाईंले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्नँ मैले के कति झलेको छु…’
कोही पुरुषले यो पढिरहेको छ भने उसले यो बुझ्नुपर्छ कि यसले तपाईंको ज्या’न पनि लिनसक्छ । यदि तपाईंले यो बुझ्नुभएको छ कि तपाईंसँग आफूलाई बचाउने मौका छ
यो सबैले तपाईंको ज्यान लिन सक्थ्यो…
मैले न त उनीविरु’द्ध कुनै प्रमाण जम्मा गरेँ न नै कसैलाई यसबारे बताएँ ।
म केही सपोर्ट ग्रुपको खोजीमा थिएँ तर युक्रेनमा महिलाका लागि मात्रै सपोर्ट ग्रुप छ । अन्त्यमा मैले सानफ्रान्सिस्कोको एउटा अनलाइन सपोर्ट ग्रुप पाएँ, जसले पुरुषका लागि काम गर्दथ्यो ।
मैले युक्रेनमा सुरुमा जुन थेरापिस्टलाई भेटेको थिएँ, उनले मेरो खिल्ली उडाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यस्तो हुँदैन, तिमी पुरुष हौ, ऊ महिला हो ।’ मैले ६ जना थेरापिस्ट परिवर्तन गरेँ त्यसपछि मात्रै सही मद्दत पाएँ । मलाई कसैमाथि विश्वास गर्न ८ महिना लाग्यो ।
मैले उनीविरुद्ध मु’द्दा दर्ता गर्नेबारे पनि सोचेको थिएँ तर अब म यस्तो गर्न चाहन्नँ । लामो समयसम्म मैले यो चाहेँ कि उनले जे जति गरिन् त्यो सबै स्विकार गरेर माफी मागोस् ।
म अहिले पनि काममा जादिनँ र मेरा लागि दैनिक बिहान बेड छोड्नु पनि मुश्किल हुन्छ । मसँग बाँच्नका लागि केही पनि छैन । मलाई थाहा छैन कि यत्तिका वर्षसम्म म के गरिरहेको थिएँ ? मलाई थाहा छ कि अब न त मेरो कसैसँग सम्ब’न्ध हुनेछ न बच्चा । मैले आशा मा-रिसकेको छु । तर मैले यति लामो समयसम्म चुप बस्नु भने हुँदैनथ्यो ।
यदि कोही पुरुषले यो पढिरहेको छ भने उसले यो बुझ्नुपर्छ कि यसले तपाईंको ज्या’न पनि लिनसक्छ । यदि तपाईंले यो बुझ्नुभएको छ कि तपाईंसँग आफूलाई बचाउने मौका छ ।
सुशान्तका बडीगार्डले रियाकाे बारेमा गरे यस्ताे खुलासा